Kasamba Ongororo - Pamhepo kuverenga psychic
Kuverenga zvinyorwa zvepfungwa > Kasamba Review
Inopa dzakawanda zvisingaiti sangano seKabbalah, I Ching, kana kuverenga, uye kunyange mapepa emhuka
Mutengo unotanga pasi se $ 1.99 paminiti kune vamwe varayiri
The Kasamba blog inoshandisa zvinyorwa zvakanyorwa nemafungiro avo kuti vazive zviri nani
Chimwe chiitiko chinokosha chekutanga kwe50% kubva pakuverenga kwako kokutanga kwepfungwa
Inopa zvipo kana uchikumbira mukati meawa 72 ekubvunzurudza kwepfungwa kana iwe usina kugutsikana
Mhuri uye kuongororwa kwemapfungwa kukubatsira kusarudza imwe yekuverenga
Inopa mazano akasiyana-siyana haatombowaniki kune mamwe mawebhusayithi ekuverenga, zvepfungwa dzepanyama, kuverengera aura, uye kupora
Pane mari yakasiyana-siyana, uye mitengo inotanga seyaderera se $ 1.99 neminiti
Kasamba inoshandisa chikwata chevaverengi vanozvimiririra zvepfungwa, pasina chekuongorora
Mamwe maverengi emapurogiramu emapurogiramu anofamba akadarika se $ 19.99 paminiti
Aya matatu emaminitsi ehurukuro akakwidziridzwa akaderera zvikuru kuti awane kunzwa kwakarurama kwepfungwa kana basa
Kasamba inopa chikwata chemapfungwa echizvimirire, saka hapana chekuongorora. Chaizvoizvo, vanobhadhara mashekeri mari yekubatana. Nekuverenga masayenzi masayiti akadai, nyatsoongorora mhinduro uye nguva yakareba yekushanda kuburikidza neKasamba. Iwe unogona kuwana mukana nehutachiwana, hwepfungwa dzinodhura, asi huri ngozi. Kuenzaniswa kune dzimwe nzvimbo, iyo ine mitemo yakaoma kwazvo yekuongorora, izvi zvinonyatsofungisisa.
Kusarudza Chinhu Chakatendeka uye Chakanaka Psychic
Tsvakurudzo yavo yekutsvaga inogona kuronga mafungiro nehuwandu nehuwandu, asi nehuwandu hwepfungwa dzakasayirirana nekambani ino, inogona kuwana zvishoma kugadzirisa kuita sarudzo. Kasamba akaisa mari yakawanda pakuwedzera mafungiro matsva, saka tarisiro yekuchekerera kwepanyama kunotora nzvimbo inoita masora kune vamwe vasina simba varayiri vepfungwa.
Kasamba ane zvakanyatsogadzirisa nzvimbo yavo kuitira kuti uwane nokukurumidza nzvimbo yaunoda kutarisa. Somuenzaniso, kana iwe uchida "rudo rwepfungwa" unogona kusarudza imwe inonyanya kurambana, kufambidzana, kana kusatendeseka. Iyo nzira iri nyore yokuderedza kutsvaga kwako.
Mari yevayori vepfungwa inotanga pa $ 1.99 paminiti, uye inogona kumhanya yakakwirira se $ 19.99 paminiti. Kasamba inopa mitatu maminetsi akasununguka, asi iwe unenge wakakurudzirwa kuti uchengetedze kukurudzirwa zviri nani, sezvaunenge uchingotora kuverenga kunotanga mumaminitsi matatu. Tarot reader, somuenzaniso, inogona kutora miniti (kana kupfuura) kuti uwane kuti ndeupi rudzi rweutungamiri hwauri kutsvaga, tsvaga makadhi, uye ugozvibata. Iva nechokwadi chokuti iwe unowana kukurudzirwa uko iwe unogona kusvika pakuziva ruzivo pamutengo wakakodzera. Mhando yega yega yekuverenga uye imwe yepfungwa inotengwa zvakasiyana, saka. iwe unogona kuungana kune paypal kana kupinda muchechi yako tsanangudzo, uye iwe uchakwaniswa maererano nezvaunoshandisa.
Kasamba vane sarudzo dzakanaka dzekutaurirana. Uye kunyangwe nzira dzekutaurirana dzichisiyana maererano nesarudzo yepfungwa, iwe unowana dzakasiyana siyana dzefoni, chat, uye email sarudzo dziripo. Zvinoreva kuti iwe unogona kusarudza maitiro aunofarira kugamuchira kuverenga kwako.
Zviyeuchidzo uye Kubhadharwa
Kana iwe usingafari nekuverenga kwepfungwa, udzore chikumbiro chekudzorera mukati maawa 72 kubva pakuguma kwekuverenga. Iwe unoita izvi nekuzadzisa "tikiti yekutsigira" mune yavo yekugadzirisa nzvimbo. Zvose zvikumbiro zvinotungamirirwa nekugamuchirwa naKasamba, asi hazvisi pachena kuti zvinotora nguva yakareba sei.
Uine huwandu hwakawanda hwepfungwa dzinopa hunyanzvi hwakasiyana uye nhanho dzakasiyana dzemitengo, unozowana munhu anokwana bhajeti rako uye zvaunoda. Kasamba inopa dzimwe niches dzisina kujairika, asi yakave imwe yenhare huru yekuverenga zvepfungwa munyika, inotaridzika kubvumira madhimoni kuzvimiririra kuisa mitero yavo uye kutarisira bhizinesi rinozvimirira nekutsigirwa kambani huru.